न्यूरोडमा बर्दीको प्रहरीलाई गाडीभित्रै मुक्का हान्ने युवाहरू को हुन् ? – Kavrepati
Home / मनोरंजन / न्यूरोडमा बर्दीको प्रहरीलाई गाडीभित्रै मुक्का हान्ने युवाहरू को हुन् ?
admin3weeks ago	मनोरंजन Leaveacomment 98 Views
काठमाडौं, भदौ १६ : ड्युटीमा खटिएका प्रहरीलाई मुक्का हानेको भिडियो सार्वजनिक भएको छ। सडकमा रोकिराखेको प्रहरीको गाडीभित्र बसेका प्रहरीलाई नै एक हुल युवाले मुखमा मुक्का हानेको देखिन्छ। ८-९ जनाको समूहमा रहेका युवाले ती प्रहरीको मास्क खोल्नेदेखि मुक्काले समेत हान्छन्।
सार्वजनिक भएको ४ मिनेट २७ सेकेन्ड लामो उक्त भिडियोमा फिल्डमा खटिएका कमाण्डर भने युवा जमातलाई रोक्ने प्रयास गर्छन्। यति गर्दा समेत उनीहरुले प्रहरीलाई टेर्दैनन्। ठेलमठेल गर्दै गाडीभित्र बसेका प्रहरीलाई मुक्का हान्छन्। ‘ठूला कुरा गर्ने ? फोटो खिच्ने ?’ भन्दै प्रहरीलाई उनीहरुले कपाल तान्नेदेखि, मुखमा लगाएको मास्क खोलेर मुक्का हानेको भिडियोमा देखिन्छ। कुटपिट गरिसकेपछि केही पर गएका उनीहरु फेरि फर्केर आएर प्रहरीमाथि कुटपिट गर्छन्।
यति हुँदासम् फिल्ड कमाण्डर भने ती युवाको जमातलाई सम्झाउन मात्रै खोज्छन्। युवाको जमातले ड्युटीमा रहेको प्रहरीलाई मुक्का हान्दा समेत प्रहरी निरिह भएको भिडियोमा देखिन्छ। ‘सिपाही भएर बढ्ता हुने’ भन्दै उनीहरुले प्रहरीलाई फर्कि–फर्की कुटपिट गरेको देखिन्छ। त्यसको केही समयमा प्रहरीको थप टोली पनि घटनास्थल आइपुग्छ। उनीहरु पनि ती युवाको जमात अघि निरिह भएको देखिन्छ। उनीहरुले ‘तेरो एआइजी हरि पाललाई बोला’ समेत भनेको भिडियोमा सुनिन्छ।उनीहरुले ‘एउटा सिपाहीलाई सम्झाउन सक्दैन ? हरि पाललाई बोला’ भनेर प्रहरीलाई धम्की दिन्छन्।
यसबारे हामीले जिज्ञासा राख्दा उक्त घटना भदौ ११ गतेको भएको पाइएको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसएसपी अशोक सिंहले उक्त घटना भदौ ११ गते रातिको न्यूरोडस्थित पिपुल्स प्लाजा अगाडिको भन्ने जानकारी आएको बताए। ड्युटीमा रहेको प्रहरीमाथि त्यसरी मुक्का हान्ने समूहको खोजी भइरहेको र उनीहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने एसएसपी सिंहले बताए।
‘मुक्का हान्ने समूह जो भएपनि उनीहरु कारबाहीको दायरामा आउँछन्। उनीहरुको खोजी भइरहेको छ’, एसएसपी सिंहले भने। उता काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख तथा एआइजी हरि पालले पनि युवाहरुको पहिचान गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंलाई निर्देशन दिइसकेको बताए।
उक्त भिडियो सार्वजनिक भएपछि पूर्वडीआईजी पूर्णचन्द्र जोशीले प्रहरीमाथि हातपात गर्नेलाई हदैसम्मको कारबाही हुनुपर्ने बताएका छन्। उनी भन्छन्, ‘प्रहरी आफैंले कुनै गल्ती गर्नु हुँदैन। आफू सहि हुँदाहुँदै कसैले अति गर्छ भने त्यस्तालाई नियम सिकाउनु पर्छ।’
Previous रामकुमारी झाँक्री शिक्षा मन्त्री बन्दै !
Next काठमाडौं उपत्यकामा हट्यो निषेधाज्ञा, के-के खुल्यो?